Faah Faahinta Heshiiska Ay Chelsea La Gaadhay Frank Lampard Iyo Waqtiga Soo Laabaashadiisa Blues Lagu Dhawaaqayo. - Gool24.Net
Faah Faahinta Heshiiska Ay Chelsea La Gaadhay Frank Lampard Iyo Waqtiga Soo Laabaashadiisa Blues Lagu Dhawaaqayo.
Maamulka kooxda Chelsea iyo halyaygoodii hore ee Frank Lampard ayaa ugu danbayn gacmaha isa saaray waxayna qalinka ku duugeen heshiiska ay maalmihii ugu danbeeyay ka soo shaqaynayeen ee uu Lampard ku noqonayo macalinka cusub ee Blues.
Isniintii shalay kooxda Derby County ayaa soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegeen in Chelsea iyo Frank Lampard la siiyay shalay iyo maanta oo talaado ah, waxayna Derby County doonaysaa in maanta ilaa caawa lagu dhawaaqo heshiiska Frank Lampard.
Kadib markii isniintii shalay ay maamulka Chelsea iyo Frank Lampard qaateen dhamaystirka faah faahinta qodobadii ugu danbeeyay ee heshiiska uu macalinka ugu noqonayo kooxdiisii hore waxaa la ogaaday nooca heshiiska uu saxiixay.
Chelsea dhexdeeda, haddana waxa uu Frank Lampard ka yahay macalinka kooxda kowaad, waxaana la sugayaa oo kaliya in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo heshiiskiisa.
Maanta ilaa caawa ayaa la filayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqi doono in Frank Lampard uu si rasmi ah u badalay Maurizio Sarri isla markaana ay taasi keeni doonto in kooxda Derby County ay tababare cusub raadsan doonto.
Frank Lampard ayaa ogolaaday heshiis saddex sanadood ah oo uu sanadkiiba mushaar ahaan u qaadan doono 4 milyan gini laakiin waxaa jira lacago gunooyin ah oo haddii uu Lampard kooxdiisa waxyaabo gaar ah gaadhsiiyo uu heli doono.
Frank Lampard ayaa lacag 5 milyan gini ah ku heli doono haddii uu kooxdiisa Chelsea ka caawiyo in ay xili ciyaareedka cusub u soo baxaan tartanka UEFA Champions league.
Frank Lampard ayaa soo magacaabi doona shaqaalaha tababarka ee kooxdiisa Blues kala shaqayn doona iyada oo ayna kala cadayn haddii uu Shay Given sii joogi doono Derby County iyo haddii uu Lampard u soo raaci doono Stamford Bridge.
Lampard ayaa la filayaa in uu Stamford Bridge keeni doono xidigii hore ee khadka dhexe ee Jody Morris iyo waliba Chris Jones waxaana la filayaa in maalinta jimcaha uu Lampard diyaar ku noqon doono xarunta tababarka Blues oo ay ciyaartoydu ku soo laaban doonaan.
Si kastaba ha ahaatee, ugu badnaan 48 ka saacadood ee soo socda oo ay maanta iyo caawu ku jiraan ayaa la filayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqi doono heshiiska uu Frank Lampard kula wareegayo shaqada tababaranimo ee Blues.